हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) मा कृयाशिल म तत्कालीन नेकपा माओवादिको एक योद्धा थिएँ । पार्टिको सरकार भयो भने जनताले आमूल परिवर्तन नपाए पनि केही सुधार, केही फरक, केही राहत र सन्तोष त पक्कै पनि पाउंछन नै भनेर सोँचेको थिएँ । सबै-सबै सपना केवल सपनामै सिमित रह्यो। कांग्रेस, राप्रपालाइ समेत उछिनेर आज हाम्रो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कालो बजारी, कमिशनखोरी नाताबाद, कृपाबाद खै के के हो के के सबैमा नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेकै छ।
आस्थ,निष्ठा, इमान्दारता, बिश्वास र त्यागले ति कमरेडहरुलाइ बिर्सिइसक्यो या कमरेडहरुले बिर्सिए । त्यो ठ्याक्कै भन्न नसकेपनी जाल झेल जान्ने, फटाइमा सिपालु, पैसा वालाले पार्टि नै कब्जा गरे भन्न चै जो कोहि पनि सामान्य चेतना भएको मान्छेले समेत पनि सक्छ ।
कार्ल मार्क्सका चेला हामी सर्वहाराहरुको मुक्तिको खातिर हासी-हासी ज्यानको आहुती दिने हामी संसारका सबैभन्दा क्रान्तिकारी मान्छेले लडेर ल्याएको पार्टिद्वारा संचालित सरकार आज कस्तो छ? के हिजो हामिले परिकल्पना गरेको जनसत्ता यस्तै थियो? के नेपाल आमाका हजारौं महान सपुतहरुले आज यहि दिन देख्नका लागि आहुती दिनुभएको थियो? यस्ता र यसप्रकारका सयौं प्रश्नहरुको जवाफ हिजोका क्रान्तिनायकहरुले आज दिनु पर्दैन? पार्टी एकता भइसकेपछी पुर्व एमाले नै भएपनी केपी ओलि लगायतका नेताहरुले यसबारे सोंच्नु पर्दैन? सामान्य कम्पनी ‘मर्ज’ हुँदा पनी ती कम्पनीका पुर्वबत निर्णय, योजना, नाफा, घाटा सबै एकीकृत कम्पनीको दायित्वभित्र पर्दछन भने के सिंगो मुलुक हाँक्ने पार्टीहरु एक हुँदा उनिहरुका पुर्वबत प्रतिबद्धता वा सपनाहरु एकीकृत पार्टिको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्दैन?
तपाईंको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु मध्य कसले खरिद गर्यो तपाइँको त्यो टाउको ? र, त आज तपाइँ टाउको नै नभएको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ। भन्नुस, पृय कमरेड, तपाईं आफैले बिक्रि गरेको तपाईंको टाउको पुनः खरिद गरेर तपाइँकै घाटीमा जोड्न हामिले के गर्नुपर्छ? महादेवले गणेशको घाँटिमा हात्तीको टाउको जोडेजसरी भएपनी हामी तपाईंलाइ बचाँएर पुज्न चाहान्छौं। जसरी हरेक पुजामा सबैभन्दा पहिले महादेवद्वारा शिर काटिएका श्री गणेशको पुजा गरिन्छ ।
श्रद्देय, सम्मानित र महान कमरेड भनेर सम्बोधन गर्न मन थियो कुनै पलका क्रान्तिनायकहरुलाइ तर यो ढुकढुकिले उहाँहरु त्यसको लागि लायक नै हुनुहुन्न भनिदिन्छ । त्यसैले मनले नमान्दा नमान्दै पनि तपाईंहरु अप्रीय नै हुँदा पनि आत्मघात नै गरेर म पृय कमरेड भनेर सम्बोधन गर्दैछु। पृय कमरेड, तपाईंहरुले हिजोका सारा सपना त घाममा सुकाइदिनु भयो । र, ती हरिया सपनाहरु आज सुकेर सुकुटी जस्तै खिङ्रीङ्ग परेका छन । तपाईँ त त्यही सपनाको सुकुटिलाइ सितन बनाएर बिदेशी मदिरामा लठ्ठ हुनुहुन्छ। तर हामिलाइ यति भनिदिनु न है, कि हिजोका सपना पूरा गर्न आज को बाधक भयो? कस्ले रोक्यो तपाइँलाई?
अनि सक्नुहुन्छ भने यो पनि भनिदिनुन हिजो तपाईंको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु मध्य कसले खरिद गर्यो तपाइँको त्यो टाउको र त आज तपाइँ टाउको नै नभएको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ। भन्नुस, पृय कमरेड, तपाईं आफैले बिक्रि गरेको तपाईं टाउको पुनः खरिद गरेर तपाइँको घाटीमा जोड्न हामिले के गर्नुपर्छ? महादेवले गणेशको घाँटिमा हात्तिको टाउको जोडेजसरी भएपनी हामी तपाईंलाइ बचाँएर तपाईंकै नामबाट हरेक दिन सुरु गर्न चाहान्छौं। जसरी हरेक पुजामा सबैभन्दा पहिले महादेवद्वारा शिर काटिएका श्री गणेशको पुजा गरिन्छ ।
ट्यागहरू: #कमरेड टाउको चाहियो?#नेपालको राजनीति#सन्तोष बस्याल
यसरी काम गरौं, सिंगापुर र स्विजरल्याण्डले भनुन; हामी नेपाल जस्तो बन्नुपर्छ